Rastrabani.com | किन भयो रिमाको डिभोर्स ? - Rastrabani.com किन भयो रिमाको डिभोर्स ? - Rastrabani.com
आफ्नो श्रीमान् सँग डिभोर्स गर्ने नेपाली नायिकाको सूची लामो छ । यस्तो सूचीमा थपिएकी छन् नायिका रिमा विश्वकर्मा । दुई वर्षअघि रिमाले भव्य समारोहका बीच बेलायतनिवासी रोबर्ट विश्वकर्मासँग बिहे गरेकी थिइन् । बिहेपछि रिमा नेपालमै र रोबर्ट बेलायतमा बस्दै आएका थिए । सम्भवतः टाढा बसेकाले होला, दुईबीच आत्मीयता गाढा हुनै पाएन । त्यसैले उनीहरूको सम्बन्ध डिभोर्समा पुगेर टुंगिएको छ ।